GIANT SCHNAUZER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Giant Schnauzer Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Boomer weyn ee weyn Giant Schnauzer da'da 2 1/2 sano
Liistada eeyaha waaweyn ee loo yaqaan 'Schnauzer Mix Beds Dogs'
Giant Schnauzer waa eey weyn, xoog leh, is haysta. Waxay umuuqataa nooc ka weyn Heerka Schnauzer . Dhererka eeyga ayaa la mid ah dhererka, isaga oo siinaya muuqaal laba jibbaaran. Madaxa waa mid xoogan oo muuqaal ahaan leydi ah. Afku waa dherer la mid ah kan kore ee madaxa. Joogsiga ayaa yar. Sanka weyn waa madow. Bushimahu way madowyihiin iskumana shubaan. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha oval-ku waa dhexdhexaad, qoto-dheer oo mugdi ah. Dhegaha ayaa kor loo saaray madaxa waana la jarjaray ama waa lagu ilaaliyay dabiici ahaan. Markii la gooyo waxay istaagaan iyagoo taag daran oo caarad leh. Markii si dabiici ah looga tago dhagaha waa qaab V, waxaa loo qaadaa meel u dhow madaxa. Dhabarka ayaa toosan. Lugaha hore waa toos marka laga eego dhinacyada oo dhan. Dabada ayaa sare loo dhigay waxaana badanaa lagu xiraa wadajirka labaad ama saddexaad. Fiiro gaar ah: dabo goynta iyo dhegaha wax loo gooyaa waa sharci darro inta badan Yurub. Gooryaanka waxaa badanaa laga saaraa lugaha dambe, waxaana laga saari karaa xagga hore haddii ay joogaan. Jaakada laba-geesoodka ah waxay leedahay wirin, cufan adag, jaakad dibadeed oo jilicsan oo jilicsan. Timaha ayaa xoogaa ka taagan dhabarka gadaashiisa, oo leh weji jilicsan, dheer, dhawaq cufan, gadhka iyo sunnayaasha. Midabada koofiyaddu waxay ku yimaadaan madow adag iyo milix iyo basbaas.
Giant Schnauzer waa eey caqli badan oo shaqeysan kara oo xasilloon oo leh jimicsi ku filan. Lagu kalsoonaan karo, geesi ah, daacad ah, geesinimo leh oo xoog badan, waxay jeceshahay inay la joogto milkiilaheeda wakhti kasta. Way fududahay in la tababaro, sida ugu fiican ugaga jawaab celis adag, degenaansho leh dabeecad wanaagsan, abaalmarin dhaqan wanaagsan. Haddii Giant Schnauzer si habboon loo tababaray oo si wanaagsan loola dhaqmay milkiile shirkadeed, waxay ka dhigeysaa xayawaan aad u wanaagsan. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Giant Schnauzers waxay u muuqataa inay tahay dhinaca xukuma waxayna u baahan tahay milkiile fahamsan dabeecadaha canine ka oo yaqaana sida loo muujiyo awooda, si deggan, laakiin adag, kalsooni leh isla markaana waafaqsan. La'aanteed waxay noqon karaan kuwo ka badbadis badan oo halis ah, oo leh dabeecad madax adag, maadaama ay aaminsan yihiin inay alfa u yihiin aadanaha. Bulsho dad badan oo kala duwan si looga fogaado inay ka shakiyaan qof kasta oo aysan aqoon u lahayn. Adoo adeegsanaya iswaafajin buuxda waxaad ubaahantahay inaad tusto inaad ula jeedo waxaad sheegaysid. Iyagu waa ilaaliyeyaal baaxad weyn oo baaxaddooda weyn keliya ayaa ka hortag u ah dhibaatada. Ragga waaweyn ee og meeshooda inay ka hooseeyaan aadanaha, waa kuwo bulsheed, oo in ku filan hela jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah caadi ahaan way jeclaan doonaan qof walba goofball-macaan-dabiici ah. Mid ka mid ah milkiilaha ayaa leh, 'Molly-geena runti waa eey daaweyn ka ah Isbitaalka Toronto ee Carruurta Xanuunsan, laakiin wali wuxuu ilaalin doonaa gurigeenna illaa geerida haddii la riixo. Qoyskeena aad ayuu u firfircoon yahay, ama hubby ama aniga waxaan sameeyaa labo wado oo maalinle ah oo aan la qaadno shaqaalaheena taasna waa lagu daalaa sidoo kale waa baashaal badan labadeena iyo annaga. ' Qaar ka mid ah sifooyinka waaweyn ee Rafaaanku waa inay ku fiicnaan karaan adeecida, kacdoonka, gaadhiga iyo shaqada ilaalinta. Haddii si wanaagsan loo tababaray waa eeyo wax walba sameyn kara. Waxay u baahan yihiin milkiile soo bandhiga hoggaan joogto ah , ama waxay dareemi doonaan inay shaqadoodu tahay inay la wareegaan sidii eyga sare , iyaga oo u keenaya inay noqdaan kuwo ku xoog badan eeyaha kale. Haddii aan la siinin xaddiga saxda ah ee jimicsiga oo loo daayo qalabkooda, tarankaani wuu rogi karaa aad u burburin , haddii tamartooda iyo maskaxdooda mashquulsan aan si habboon loo marin. Maaddaama ay yihiin mid ka mid ah noocyada yaryar ee waaweyn ee leh jaakad aan daadin, way soo jiidasho badan yihiin, laakiin haddii aysan la helin milkiile garanaya sida loo muujiyo hoggaanka joogtada ah, badiyaa waa la siiyaa ka hor inta eeygu gaarin da'da laba sano. Waxay si cadaalad ah ugu sii jiri karaan shisheeyaha waana inay ahaadaan bulsho weyn labadaba eeyaha kale iyo dadka, doorbidayaa bilaabida marka eeygu yahay eey yar. Waxay caadi ahaan ku fiican yihiin xayawaanka kale. Rafaayaasha waxaa loo soo saari jiray jiilalka ilaalada iyo eeyaha. Way weyn yihiin waxayna leeyihiin wax aan kala joogsi lahayn, oo keenaya jilif markay maqlaan, arkaan ama dareemaan wax aan caadi ahayn.
Dhererka: Ragga 26 - 28 inji (66 - 71 cm) Dumarka 23 - 26 inji (58 - 66 cm)
Miisaanka: Ragga 60 - 105 rodol (27 - 48 kg) Dumarka 55 - 75 rodol (25 - 34 kg)
Rafaa ayaa u nugul kansarka marka loo eego noocyada badankood, gaar ahaan kansarka suulasha oo dila dad badan oo waaweyn sannad kasta xitaa haddii xilli hore la qabto. Way sii kordhayaan halista bloat . Cudurka suuxdintu waa mid aad ugu badan taranka noocan ah oo sinta dysplasia way faaftaa.
Giant Schnauzer kuma haboona nolosha guriga. Waa mid si firfircoon uga shaqeeya gudaha oo wuxuu ku fiicnaan doonaa acreage.
Rafaa ayaa baahi weyn u qaba jimicsi haddii aan si xoog leh loo samayn ugu yaraan laba jeer maalin kasta waxay ka soo boodaan darbiyada wayna adag tahay in wax laga qabto, xitaa mid aad u tababaran waa inay ku bixiyaan tamarta xad-dhaafka ah ee markii hore lagu soo barbaaray ama ay kaliya awoodaan ha dagin habeenkii. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado, ugu yaraan hal mar maalintii oo lagu daro socod dheeri ah ama jimicsi kale. Eeyadan fir-fircoon waxay qaadan doonaan jimicsi inta ay heli karaan, oo kaliya waxay jecel yihiin kal-fadhiyada ciyaarta inta ay socon karaan si bilaash ah. Haddii aad hesho Giant, qorshee socod dheer oo maalinle ah, orod, socod socod, baaskiil wadid, dabbaal, ama inaad ku lug yeelatid kacsanaanta (koorsada carqaladda), adeecida horumarsan, Schutzhund (ilaalinta), gaadhiga, raadinta, ama waxqabad la mid ah kaneecada Haddii aadan haysan waqti aad ugu talo gasho mid ka mid ah kuwan, kani ma aha nooca aad adigu u baahan tahay.
Jaakada dharka ayaa si macquul ah u fududahay in la daryeelo, laakiin koodhka hoose waa cufan yahay waana la matoobi doonaa ilaa laga shanleeyo ama lagu cadeeyo asbuucii iyadoo burush silig gaagaaban ah. Soo xir guntiyo oo ku caday hadhuudhka marka hore, ka dib hadhuudhka si aad uhesho jaakad. Xayawaanku waa in la jarjaraa illaa dherer ugu yaraan afar jeer sanadkii oo daryeelka dhegta si joogto ah ayaa muhiim u ah. Qofku wuxuu si fudud u baran karaa sida loo sameeyo naftiisa. Eeyaha xayawaanka ah guud ahaan waa la jarjarayaa, oo muujiyana eeyaha sida caadiga ah gacanta ayaa laga xayuubiyaa, taas oo ah hannaanka gacanta looga siibay timaha ilaalada dibadda midkood farahaaga ama mindi lagaa jarayo. Ku wareeji indhaha iyo dhegaha maqas aan afka lahayn oo nadiifi afuufka cuntada ka dib. Iyagu ma laha ur eyga u eg oo wax yar illaa timo ma daadiyaan.
Giant Schnauzer wuxuu asal ahaan ka yimid qaybaha Wurttenberg iyo Bavaria ee Jarmalka. Intii lagu gudajiray sannadihii kudhowaad qarnigii, labadaba Jarmal jilicsan iyo timo jilicsan Schnauzer pups ayaa ka muuqday isla qashin. Naadiga Jarmalka ee Pinscher Schnauzer Club ayaa bilaabay siyaasad u baahan caddayn saddex jiil oo ka mid ah jaakadaha Schnauzer timaha aan caadiga ahayn ee diiwaangelinta. Tani waxay si dhakhso leh uga caawisay dejinta nooca oo ka dhigtay iyaga nooc ka duwan kan Jarmal Pinscher . Kuwaas Schnauzers ayaa loo bixiyey magaca Heerka Schnauzer . Kuwani Standard Schnauzers waxaa lala tallaabay madow Daanyeer Weyn iyo Bouvier des Flandres si loo sameeyo Giant Schnauzer. Magaca Schnauzer oo laga soo qaatay ereyga Jarmalka 'Schnauze,' oo macnihiisu yahay 'muzzle.' Giant Schnauzer waxaa Jarmalka loogu yeeraa 'Riesenschnauzer', oo macnaheedu yahay 'Rafaa'. Giant Schnauzer waxaa loo adeegsaday eey wadista Bavaria, iyo eey waardiye ah oo booliska iyo milatariga wuxuuna ku fiicnaa Schutzhund.
Daaqa, AKC Shaqaynta
Lucy, waa 3-jir Giant Schnauzer oo badbaadisay iyadoo xiran astaanta calanka Mareykanka
Bella madow iyo lacag Giant Schnauzer oo 3 sano jir ah oo leh jaakaddiisa oo aad loo qurxiyay.
Bella madow iyo lacag Giant Schnauzer oo ah eey
Bella madow iyo lacag Giant Schnauzer oo ah eey yar markay tahay 8 toddobaad
Charlie madow Giant Schnauzer oo ah 2 sano jir 1/2 isagoo xiran bandana Calanka Mareykanka— 'Kani waa Charlie, aniga 2 jir iyo badh Giant Schnauzer. Charlie waa eey cajiib ah oo nolosha ka buuxa oo jecel inuu ciyaaro. Charlie wuxuu noqon karaa goofball. Waa wiilkayga qurxoon, oo aan laf lafkiisu ku jirin jidhkiisa! Waxa kaliya ee uu doonayo inuu sameeyo waa ciyaar iyo waqti fiican. Sida Giant-ka caadiga ah, wuu adkaan karaa mararka qaarkood. Waan ku raaxaystaa sawir qaadista Charlie waana jeclahay daqiiqad kasta oo aan la qaadan karo isaga. '
Milix iyo basbaas iyo qof weyn oo madow oo weyn Giant Schnauzers — Sawir waxaa iska leh Skansen Kennel
'Tani waa Giant Schnauzer Ch. Nadaafadda Ruuxa Galili. Iyadu waxay ahayd # 1 eey show ah oo Mareykanka ku yaal 2008 dhammaan noocyada. Halkan waxay ku guuleysaneysaa bandhigga ugu fiican Onondaga Kennel Association Show bishii Maarso, 2008 ee Syracuse, New York. ' Lahaanshaha sawirka Andrea Barber Photography
Mater Giant Schnauzer eey yar oo 8 toddobaad jir ah— 'Si aad sifiican ugu fahanto eeygayga, waa inaad kudhowaad wiilkayga agjoogtaa! Waa laba digir oo jiingad ku jira! Wiilkaygu waa 5 jir, Mater-na waa sanad iyo badh. Waxaan helay Mater markii uu jiray 8 toddobaad. Dhegihiisa weligood lama jarin, markaa waxay umuuqataa inay kudareyso shaqsiyaddiisa goofy. Sida sharraxaadda noocyadu sheegto, wuu ilaaliyaa oo wuxuu siiyaa xayawaan duufaan ah oo ku dhaca shisheeyaha iyo sawaxanka uusan aqoon u lahayn. Wuu fiicanyahay bulsho oo wuxuu jecel yahay eeyaha oo dhan, yar iyo weynba. Isagu ma aha xukuma agagaarka nooc kasta oo ey ee uu soo gaadhay, laakiin si kastaba ha ahaatee wuxuu isku dayi doonaa iyo xukuma ilmo yar haddii ay ku kacaan cabsi isaga - markaa waxaan u baahanahay inaan dhexgalo oo aan taas tuso isagu waa eeyga, iyaguna waa aadanaha wuuna ku kalsoonaan karaa iyaga. Wuxuu sifiican ulala dhaqmaa caruurta 4 sano ama ka weyn maxaa yeelay markaa way da 'weyn yihiin inay kubad u tuuraan oo ay la ordaan. Isaga jimicsi wuxuu ka dhacaa barxada iskuulka / baarkinka ee ka dambeeya dabaqyadayada kooxdii caadiga ahayd ee 8-12 caruurtiina way la ciyaaraan wuuna jecel yahay. Ma ahan mid dagaal badan, laakiin waa mid ilaalin kara.
Jada Giant Schnauzer oo 7 jir ah— 'Jada waxay cadeysay inay feejignaan badan leedahay, aadna u ilaalineyso, oo ay aad u daacadsan tahay sida eeyga' Velcro 'oo run ah, waxay jecel yihiin dadkooda. Filo a ey xoog badan leh . Waxay qaadatay muddo 6 sano ah inay iyadu barato biiro tamarta 'on-off'. Jimicsiga joogtada ahi waa mid looga baahan yahay Giant deggan oo bulsheed, iyo sidoo kale tababar adag oo joogto ah. Waxay leeyihiin saameyn culeys culus, cabbirkoodana, aad ayey muhiim u tahay in la awoodo aqri eygaaga . '
Eeg tusaalooyin badan oo Giant Schnauzer ah
Giant Schnauzer Sawirada 1
Giant Schnauzer Sawirada 2
dane weyn weimaraner isku dhafan oo iib ah
qoob ka ciyaarka eeyaha iyo shaybaarka
8 bilood jir retriever
pictures of eey buurta Caddaan ah